Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): အစိုးရနဲ့ KIO ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုလမ်းစဉ်တွင် အဟန့်အတားဖြစ်နေဆဲဟု KIO ပြော
အစိုးရနဲ့ KIO ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုလမ်းစဉ်တွင် အဟန့်အတားဖြစ်နေဆဲဟု KIO ပြော
at 2/07/2013 07:40:00 PM
ကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)နှင့် မြန်မာအစိုးရသည် စ စ်ရေးတင်းမာမှုအား ပြေငြိမ်းနိုင်ရေး နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများအကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်နေသော်လည်း လက်တွေ့မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်ရေးလမ်းစဉ်တွင် အဟန့်အတားဖြစ်နေသေးကြောင်း KIO ပြောသည်။
ယမန်နေ့ KIO ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီများ တရုတ်ပြည်နယ်ရွှေလီမြို့တွင် ထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့စဉ် ခိုင်မာသော စစ်ပြေငြိမ်းရေးကို အလျင်အမြန်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသောနေရာများကို လေ့လာစောင့်ကြည့်စီစစ်ရေးစံနစ် ပေါ်ပေါက်လာရေး ဆက်လက်သဘောတူညီခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် ၄င်းငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ်ကိုသွားနေစဉ်ပင် ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့၏ထိုးစစ်ဆင်မှုများ ပုံမှန်လှုပ်ရှားနေခြင်းသည် စစ်ပြေငြိမ်းရေး အလျင်အမြန်အကောင်ထည်ဖော်ရေးကိစ္စအတွက် အဓိကအဟန့်အတားဖြစ်ကြောင်း KIO ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ် (Sumlut Gam) က ပြောသည်။
“သူတို့က အခုလို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ လုပ်နေပေမဲ့ ပစ်တာတွေရှိသေးတယ်လေ။ ဦးသိန်းစိန်က လဂျားယန် နယ်မြေမှာ သူတို့ ထိုးစစ်မလုပ်ဘူး ရပ်ထားတယ်ဆိုတာကို ပြောထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဖက်မှာတောင် တခါတလေ အမြှောက်တွေ ပစ်နေတယ်။ သူတို့က ရပ်ထားတယ်ပဲပြောတာ ဘယ်ရက်ထိဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိဘူး။ ဘယ်လောက်ခံနိုင်မယ်ဆိုတာတွေမပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် အဓိပ္ပါယ်က အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်လေ။ တခြား ဖားကန့်တို့ ပန်ဝါတို့ မိုင်ဂျာယန်ဖက်တွေမှာလည်း ပစ်ခတ်နေသေးတယ်။ အိမ်တွေကိုလည်း မီးရှို့တာတွေလုပ်နေတယ်။” ဟု ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်က KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
၄င်းဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်ဖက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းထားရှိရေးနှင့် နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှုများလျှော့ချနိုင်ရေးကို ညှိနှိုင်းခဲ့သည့်အပြင် လာမည့်အချိန်တွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးရေးနှင့် သက်သေအဖြစ် ပါဝင်နိုင်မည့်အဖွဲ့အစည်းများကို ဖိတ်ခေါ်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု ပူးတွဲကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အစိုးရတပ်နှင့် KIO ကြား နှစ်ဖက်တပ်များ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနိုင်သောနေရာများတွင် ညှိနှိုင်းကာ တိုက်ပွဲများ လျှော့ချရေးကို ယခင်နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများတွင်လည်း သဘောတူညီမှု ထုတ်ပြန်ကြေငြာမှုများရှိခဲ့သော်လည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိပဲ ဆက်လက်တင်းမာနေသော တိုက်ပွဲများသည် ယခုနှစ်ဆန်းတွင် KIO ဌာနချုပ်နယ်မြေရှိ ခြေကုတ်စခန်းများကို အစိုးရတပ်မှ ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ချိန် ယခုအခါ တင်းမာမှုလျှော့ချရေးကိစ္စ ပြန်လည်သဘောတူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသောကြောင့် အဆိုပါနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံရေးကိစ္စကို KIO ဖက်က ပြင်ဆင်မှုမရှိသေးချိန် တရုတ်အစိုးရ၏ ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီကို တရုတ်ပြည်တွင် အလွတ်သဘော သွားရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်က ပြောသည်။
“ကျနော်တို့က အစီအစဉ်မရှိဘူး။ တရုတ်ဖက်က ဦးအောင်မင်းတက်လာတယ်ဆိုပြီး ခေါ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကမန်းကတန်းလာခဲ့တာ။ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဘာမှ မဆွေးနွေးဘူး။ ဒီလမကုန်ခင် ပြန်တွေ့မယ်။ နောက်တခါ ဘယ်လိုပြန်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးမှု ရယူတဲ့အဆင့်ပါပဲ။ နောက်တခါမှ UNFC အဖွဲ့အနေနဲ့ အရင်ဆွေးနွေးပြီးမှ ပြန်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာတွေပဲ အဲဒီအချိန်မှ သူတို့ စစ်တပ်တွေ ကျနော်တို့ KIA တပ်တွေနဲ့ အရမ်းနီးတဲ့နေရာတွေမှာ ပဋိပက္ခဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေကို လိုက်ကြည့်ပြီး။ ဘယ်သူက ဘယ်လိုရွှေ့ရင်ကောင်းမယ် ဆိုတာတွေကို လိုက်စစ်ဆေးမယ်။ လိုက်ကြည့်ပြီး ဖြေရှင်းသွားမယ်။” ဟု ဆိုသည်။
စစ်ပြေငြိမ်းရေးကို အလျင်အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ရေးသဘောတူညီချက်ရရှိထားနေချိန် တဖက်မှာ KIA တပ်ရင်း (၆) နယ်မြေ ဖားကန့်ဖက်တွင် အစိုးရတပ်သည် KIA ရှိမည်ဟု ယူဆထားသောနေရာများတွင် လက်နက်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းများပြုလုပ်နေပြီး ကျောက်စိမ်းထွက်ရာ မော်ဆီဆာ၊ ကသေမှော်၊ မာဆာမှော် နေရာများတွင်လည်း စွန့်ပစ်ကျောက်စိမ်းရိုင်းတုံးကောက်နေသော (ရေမဆေးသမား) ပြည်သူများကို ရမ်းတန်းပစ်ခတ်နေခြင်းကြောင့် ပြည်သူလူထုစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြောင်း KIA တပ်ရင်းမှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ဒွဲက ပြောသည်။
“ဒီမနက်လည်း ၆ နာရီကနေ အခုထိ ပစ်နေတယ်။ ရေမဆေးကောက်တဲ့လူတွေကို လိုက်ပစ်နေတာ။ မနေ့ကလည်း ညနေထိ လိုက်ပစ်နေတယ်။ သူတို့က လူရှိတာတွေ့ရင်လိုက်ပစ်ပြီ။ ထိခိုက်တာတော့ မကြားသေးဘူး။” ဟု KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် ဖားကန့်မြို့နယ်ရှိ KIA တပ်ရင်း (၆) တပ်ခွဲ (၉)၏ ညောင်ထောက်စခန်း၊ တက်ခွဲ (၂) ၏ လိုင်ဆိုင်းစခန်းနှင့် တိုက်နယ်ရုံး၊ ခေါင်းပါးတိုက်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးရုံး တို့ကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ဖားကန့်ဖက်သို့ အစိုးရတပ်များ ထိုးစစ်ဆင်မှုသည် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ KIO ဌာနချုပ်အနီး လဂျားယန်နယ်မြေတွင် ထိုးစစ်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးနောက်နေ့မှစ၍ ကျောက်စိမ်းမှော်ရှိရာ ဖားကန့်နယ်မြေဖက်သို့ ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်လာပြီး ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက်နေ့ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲတွင် KIA တပ်ရင်းအချို့ လက်လွတ်ခဲ့ရပြီး အစိုးရမှမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ဒွဲကပြောသည်။
ယမန်နေ့ည ၁ နာရီတွင်လည်း KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာအနီးရှိ လ၀ါယန်တပ်စခန်းသို့ မန်ဆိုင်းအစိုးရတပ်စခန်းမှ ၁၀၅ မမနှင့် ၂ ကြိမ်ပစ်ခတ်ပြီး လကန်းဘွမ် အစိုးရတပ်စခန်းမှ ၈၁ မမ နှင့် ၄ ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း လိုင်ဇာ KIA အရာရှိများပြောသည်။
ထို့သို့ အစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA ကြား တင်းမာမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေချိန် နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပေါ်လာပြီး စစ်ပြေငြိမ်းရေးဆောင်ရွက်ရန် ထပ်မံဆွေးနွေး၍ သဘောတူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
KIO သည် အဆိုပါငြိမ်းချမ်းရေးအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းထက် တိုင်းရင်းသားများလိုလားသော နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် စားပွဲပေါ်တွင် စစ်မှန်သောဆွေးနွေးမှုဖြင့်သာ ပြဿနာများကိုအဖြေရှာလိုကြောင်း ဇန်န၀ါရီလတွင်း အစိုးရတပ်မှ ဌာနချုပ်လိုင်ဇာကို ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်စဉ် KIO ဒုအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး-၂ ဦး လာနန် ပြောသည်။
ယခု တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာသောကြောင့် တွေ့ဆုံမှုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရာမှ ယမန်နေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် ယခုဆွေးနွေးပွဲတွင် ထူးခြားသည်မှာ တရုတ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးရုံးမှ သံအမတ်ကြီး Mr. Luo Zhaohui၊ သံမှူး Mr. Wang Zongying တို့မှ လေ့လာသူများအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး သက်သေအဖြစ် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) မှ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (တောင်ပိုင်း) RCSS-SSA မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုင်းလူး၊ ဗိုလ်မှူးကြီးစွဝ်မိန်း၊ ဗိုလ်ကြီးစိုင်းကမ်း၊ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး CNF တို့မှ Victor Biak Lian၊ မြန်မာ့အရေးဆိုင်ရာ ဥရောပရုံး (Euro Burma Office) မှ ဦးဟန်ညောင်ဝေ တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
KIO ဘက်မှ ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ် ဦးဆောင်၍ ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး လဖိုင်လ၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဖုန်ဂမ်ခွန်နော်နှင့် ဦးလဖိုင်ခွန်နော်တို့ဖြစ်ပြီး အစိုးရဖက်မှ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီဒုဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် ဦးလှမောင်ရွှေ၊ ဦးတင်မောင်သန်း၊ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်၊ ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦး တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
World must act to end Burmese military aggression ...
လွတ်လပ်မှုဆိုတာ ဖိနှိပ်မှုထက် ပိုပြီး အကုန်အကျ သက်သာ...
ပလောင်ကျေးရွာ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ရပ်မှန် ….
UN လက်အောက်ခံ ICRC ကမ္ဘာ့ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့ လိုင်ဇာ သ...
Father Desmond Mpilo Tutu: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေ...
ရှည်ရှည်ဝေးဝေး သမိုင်းတူးပြီးမပြောဘူး ဒီကြံ့ဖွတ်အစ...
(ဒူဝါ ကတော့ လယ်သမားသား မို့လို့ လယ်သမားထိရင် ရင်အန...
Demonstrators Protest Against Thein Sein in Norway...
ဦးသိနျးစိနျကို ကွိုဆိုဖို့ စောနလေား
HUGAWNG MUNG SUT DU YUP ZAU HKAWNG( THE VOICE OF K...
Akyu Grau Hpyi Ra
February 25,2013-ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၁) တပ်ရင်း(၁၀) ခ...
Feb 25, 2013 8:20am SSA/SSPP VIDEO CLICK ON
နိုင်ငံ့ဂုဏ်သိက္ခာ အစစ်အမှန်ကို ရချင်ရင် စစ်ပွဲများ...
မြစ်ကြီးနားမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ လွတ်တော် ဥက္ကဌ ဦး သူရ...
အစိုးရစစ်တပ်မှ တပ်ကြပ်ကြီး (၃)ဦးအားဘိန်းဖြူ ကီလို...
HOW TO HACK FACEBOOK ACCOUNT....
လိမ်ညာမှုကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ဆက်ညာရင်းက ဘဲ ရှေ့က လိမ်တ...
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စီးပွါး ရှာနေပြ...
Kachin Alliance members with UN human rights offic...
“GA SADI” Daw ( II )
မြန်မာသံတော်ဆင့်အပတ်စဉ်သတင်းဂျာနယ် အတွဲ (၁)၊ အမှတ်...
Religious persecution, rape still evident in Kachi...
SIMSA LAM BAWNG SHAGU GRAU SUM AI LAM NI CHYU
ကတိ ...ကတိ ပေးခြင်း ......ကတိ ပေးခိုင်းခြင်း .
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ နိုင်ငံချစ်တဲ့ အမြင်.
Lahta Sam Mung Hta Matut Manoi Gasat Nga
အ ပြောင်း အလဲ များ အပေါ် လေ့ လာ ဆန်းစစ် လျှင်ဲ
Bishop of Myitkyina: A federalist reform, for last...
Myen Dap Ni Hpyendap Grau Shagreng Wa
မြန်မာ့ ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ အနောက်အရပ်က ရေးသားတဲ့ P...
Australia,တွင်ကျင်းပသော ချင်းအမျိုးသားနေ့ သို့ KAA...
CHINESE MISSILES AIMED AT PHILIPPINES AND VIETNAM
မင်းတို့ အစိုးရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ငါ…သူပုန်ဆက်မလုပ်ခ...
ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေထက် မြန်မာအစိုးရ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ...
Statement by Kachin Development Networking Group (...
အမေရိကန် မေရီလဲန်းပြည်နယ်ရောက် ချင်းအမျိုးသားများ ...
India WARNS China 'We WILL use FORCE to protect OI...
GRAU SADI MAJA LET MAHKAM SHACHYEN DA RA AI LAM
တေးသံရှင် ပလေးဘွိုင် ဦးသန်းနိုင် အား ဗိုလ်မှုးဟောင...
Ma Ma CrideraMyit dum kyu hpyi ( Mai Ja Yang) Su...
ဦးအောင်မင်းဘေးမှ ပွဲစားများ အကြောင်းတစေ.တစောင်း--...
“GA SADI” ( I )
Yawdserk says the peace treaty may collapse with N...
လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်မှု ဒီ...
ရှားနိုင်ငံမှာ... ကောင်းကင်မှ ဥက္ကာခဲကြီး
ဖားကန့် ဒေသ တွင် မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ ခိုးဆ...
KIA နယ်မြေတွင်း အစိုးရတပ် လွှတ်ထားသော ထောက်လှမ်းရေး...
Ma Ma Crider A Labau Sumhting Hte Hpang Jahtum Na ...
Ledo lam Nam Sai KIA post hpe Myen asuya dap ni zi...
ဗမာလူမျိုးများရဲ့ နိုင်ငံရေး စံ များ
HKA KAHTAWK MI SHA GAW DANG DI NA RE, JAWM KARUM G...
KIO TURNED DOWN AUNGSAN SUUKYI'S OFFER
နေရာယူ စီမံကိန်းများအကြောင်းရေးပေးလို က်တယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ် မတန်တဆလက်နက်တွေနဲ့ တိုက်ခို...
Myanmar: Never-ending jungle warfare on China’s bo...
ဘိန်း တိုက်ဖျက်ရေး အစီစဉ်ကြောင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိ...
One hand starting cheating KIA and start compiling...
N HPAN JA RA A SHATSAM GA
ပြည်သူလူထုထံ ကေအိုင်အို မှ အသိပေး ကြေငြာချက်
Burma Govt and Kachin Rebels to Meet Next Week
Tsawra ai niaLamuga
Du Kaba Lamai Bawk A Numhtet Ga
Cemical ( htu/sha dat jang jung machyi si wa mai a...
Galoi nmalap kau Ga !!!!